Archive du 20181102
Voka-pifidianana Hivaly ao anatin’ny 12 andro
Notanterahina ny alarobia teo ny varavarana misokatra momba ity rindrambaiko ity tetsy CENI Nanisana izay nantsoina ireo fiarahamonim-pirenena, solontenan’ny kandidà ary ireo mpanara-maso fifidianana isan-tsokajiny.
Hery Rakotomanana « Aleo ny filoha lany no hanarina izay tsy mety »
Nivoaka tamin’ ny fahanginany ny CENI manoloana ny adihevitra politika maro sy fanakorontanana mitranga amin’ izao ankatokin’ ny fifidianana izao.
Fangaraharan’ny fifidianana Mipetraka ny arofanina, hoy i Rivo Rakotovao
Lavitra sy sarotra ny lalana nodiavina, betsaka ny manahirana, tiantsika ho vita izao daholo ary voavaha sy ho tanteraka avokoa ny hetahetan’ny tsirairay.
Birao fandatsaham-bato Napetraka ny paikady handavorariana ny asany
Herinandro mialoha ny hanatanterahana ny fifidianana dia nisy ny fiaraha-midinika teo amin’ny governemanta sy ny CENI ary ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara
Morarano Antongona Ny zanak’i Dada irery no nahavita propagandy tany
Toerana maro be amin’ireo faritra 22 manerana ny nosy izay tsy noeritreretin’ireo kandida hafa akory hotsidihana no tongan’ireo mpanao fampielezan-kevitry ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana.
Foko TIM Ambodimita Nanatanteraka fihaonambe ho fanomanana ny faradoboka
Ho fanomanana ny FARADOBOKA amin’ny fampielezan-kevitry ny kandida n°25, Marc Ravalomanana, ho tontosaina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina rahampitso sabotsy 3 novambra 2018 dia nanatanteraka meeting ho fampandaniana an’ity kandida n° 25
Fanevatevana mpitandro ny filaminana Voasazy i Fanirisoa Ernaivo
Namoaka fanambarana ny avy eo anivon’ny filankevitra ambonin’ny mpitsara ny alarobia teo fa teny diso toerana no nataon’ny mpitsara am-perinasa sady kandida ho filoham-pi
Seksion’ny basikety Ambohidratrimo Andro faha-2 amin’ny hetsika Basket B
Tontosa omaly alakamisy 01 novambra 2018 ny andro faha-2 amin’ny fifaninanana basiktety Be andiany voalohany karakarain’ny seksion’ny basikety baolina eny Ambohidratrimo ao anatin’ny ligin’Analamanga.
5 andro monja sisa dia hisy tantara vaovao hipetraka eto amin’ny firenena indray.
Zotram-pitaterana Suburbaine Ambohimanambola Tsy nivoatra na dia efa 600 ariary aza ny saran-dalana
Raha vao mikenonkenona ny hampakatra saran-dalana ny zotra suburbaine sasany manodidina an’Antananarivo, ny an’ny zotra mampitohy an’Ambohimanambola-Ambohijatovo kosa dia efa tamin’ny faha-15 oktobra lasa teo no nanjary 600 ariary ny saran-dalana mampitohy an’ireo toerana roa ireo.
HAONA FI eny amin’ny Village Voara Ambohipihaonan’ny fiarahamonina
Nosokafana tamim-pomba ôfisialy teny amin’ny Village Voara Andohatapenaka omaly alakamisy 1 novambra ilay hetsika Haona fi, foara karakarain’ny Fiangonana Fjkm mandritra ny telo andro.
Fampandrosoana ifotony Nanolotra 66 miliara Ariary ny fanjakana Alemana
Nisy ny fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa momban’ny tetikasa dingana faharoa ho fampandrosoana ny rehetra sy ny fitsinjaram-pahefana (PDCID II) natao tetsy amin’ny Ministeran’ny fitantanam-bola sy ny tetibola Antaninarenina tamin’ny Alarobia 31 Oktobra teo.
FANAFIHANA TANY ARIVONIMAMO
Dimy lahy nirongo basy no nanafika tranom-barotra iray tao Arivonimamo.
Nisy ny varavarana misokatra notontosain’ny avy eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana tetsy Nanisana ny alarobia teo.
Fampananana asa ny tanora Miainga amin’ny kalitaon’ny fampianarana
Natao sonia tamin’ny alarobia 31 oktobra tetsy amin’ny Hotely Colbert ny fiaraha-miasan’ny SOS Villages d’enfants sy ny orinasam-piantohana Allianz Madagasikara.
Tan-tsoroka hanalana ny fakon’Antananarivo Efa miasa ny kamio 10 avy amin’ny tsara sitrapo
Mametraka fanamby ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo fa hisy fiovana tsy ho ela ny resaka fanalana ny fako eto an-dRanivohitra.